ဖောလစ်အက်ဆစ်၏ကောင်းသောအရင်းအမြစ် | ဖောလစ်အက်ဆစ် | ဖောလစ်အက်ဆစ် Deficiency | WikiWon
2 ဖောလစ်အက်ဆစ် Deficiency
ဒါ့အပြင်ဖောလိတ်သို့မဟုတ် folacin ကိုခေါ်, ဖောလစ်အက်ဆစ် B-ရှုပ်ထွေးတဲ့ဗီတာမင်တစ်ခုဖြစ်တယ်. ဖောလစ်အက်ဆစ်ဟာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ခွေးဖြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအားကစားကထုတ်လုပ် B မနိုင်, ထိုကွောငျ့, come from food or supplements. The daily requirements of folic acid for both healthy men and women is 200 မိုက်ခရိုဂရမ် (200 မီလီဂရမ်). သို့သော်, လိုအပ်မှုကိုကြိုတင်မှတိုးနှင့်ကိုယ်ဝန်, အကြောင်းကျော်နို့နှင့်လူများအတွက်အခါ, 50 အသက်အနှစ်.
ဖောလစ်အက်ဆစ် * DNA ကိုအောင်၌အကြှနျုပျတို့၏မျိုးဗီဇကိုတက်စေသည်ပစ္စည်းဥစ္စာအရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍ) နှင့် RNA (ပရိုတိန်းလုပ်ဖို့လိုအပျတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာ), in normal growth and development, နှင့်အသစ်ဆဲလ်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်. ဒါဟာသွေးနီဆဲလ်များအတွက်ဟေမိုဂလိုဘင်ဖွဲ့စည်းရန်နှင့်အမိုင်နိုအက်ဆစ်အဖြစ်ပြောင်းလဲကိုကူညီဗီတာမင် B12 နဲ့အလုပ်လုပ်, methionine မှ Homocysteine.
A good supply of folic acid prior to and in early pregnancy reduces the risk of the baby developinganeural tube defect such as spina bifida. သင်တစ်ဦးကလေးရှိခြင်း၏စဉ်းစားတစ်ခုသို့မဟုတ်ကိုယ်ဝန်၏ပထမဦးဆုံးသုံးလပတ်၌ရှိကြ၏နေတယ်ဆိုရင်, သငျသညျတခုဖြည့်စွက်ယူသငျ့တယျ 400 မီလီဂရမ် (0.4 မီလီဂရမ်) ဖောလစ်အက်ဆစ်၏နေ့စဉ်နေ့တိုင်း.
တစ်ဦးက ချို့တဲ့ခြင်း များစွာသောလူအဆီမြင့်မားအစားအစာနှင့်လုပ်ငန်းများ၌အစားအစာများကိုစားသုံးခြင်းနှင့်အသီးအပွနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၏နေ့စဉ်အကြံပြုငါးစားသုံးခြင်းထက်လျော့နည်းစားရကတည်းကဖောလစ်အက်ဆစ်၏ယနေ့ဘုံဖြစ်ပါသည်. တစ်ဦးကဖောလစ်အက်ဆစ် ချို့တဲ့ခြင်း ထိုကဲ့သို့သော Crohn ရဲ့ရောဂါအဖြစ်အူလမ်းကြောင်းရောဂါနှင့်အတူလူထဲတွင်ဖြစ်ပေါ်, သူတို့ကဒီနှင့်အခြားဗီတာမင်ကိုစုပ်ယူမနိုငျသညျ့. Folic acid ချို့တဲ့ခြင်း အဟောင်းတွေကလူဆင်းရဲသားအစားအစာနှင့်ပုံမှန်အိုမင်း၏ရလဒ်ဖြစ်စေခြင်းငှါရှိ. ဖြည့်စွက်ကာ, သက်ကြီးရွယ်အိုဖောလစ်အက်ဆစ်များ၏အစာခြေအတှကျလိုအပျအစာအိမ်အက်ဆစ်နည်းထုတ်လုပ်ရန်. အချို့သောဆေးဝါးများနှင့်အရက်ဖောလစ်အက်ဆစ်ကိုတက်ယူမှခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စွမ်းရည်ကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်. ဖောလစ်အက်ဆစ်၏မရှိခြင်းထိုကဲ့သို့သောပင်ပန်းနွမ်းနယ်အဖြစ်လက္ခဏာတွေနှင့်အတူ megaloblastic သွေးအားနည်းရောဂါဖြစ်ပေါ်စေသည်, ပျော့ခေတ္တခဏနှင့်ဖျော့အရေပြားပေါ်တွင်အသက်ရှုမဝြခင်း. အခြားရောဂါလက္ခဏာတွေဝမ်းလျှောပါဝင်စေခြင်းငှါ, ကိုယ်အလေးချိန်, အနာ, ပါးစပ်, နှင့်ရင်ပူ. ဖောလစ်အက်ဆစ်၏တစ်ဦးကချို့တဲ့ခြင်းအစအမိုင်နိုအက်ဆစ် homocysteine ​​၏ထမြောက်စေတော်အဆင့်ဆင့်အတွက်ရလဒ်များ, နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါမှဦးဆောင်ရသော.
ဖောလစ်အက်ဆစ်ဤသူအပေါင်းတို့အစားအစာများသဘာတွေ့နိုင်ပါတယ်, သောကအနည်းဆုံးဆံ့ 30 ဖောလစ်အက်ဆစ်နှုန်း၏မီလီဂရမ် 85-200 ဆ.
ကျန်းမာရေး	folate deficiency symptoms neurological, folic acid deficiency anemia, folic acid deficiency in the elderly, folic acid deficiency symptoms, folic acid deficiency symptoms hair, folic acid deficiency treatment, folic acid foods, good research sources, good research sources for kids, good source, good source coupons, good source definition, good source means, good source of information, good source of iron, good source of vitamin d, good source search engine, good source solutions drink mix, good source synonym, goodsource staffing services, low folic acid and b12, low folic acid symptoms nhs, what disease is associated withadeficiency of b12?	bookmark
ယခင်အပိုဒ် Fibre ၏ကောင်းသောသတင်းရပ်ကွက်များ | အဲဒီပျော်ဝင်နိုင်တဲ့ Fibre | ပျော် Fibre | Fibre ၏အကျိုးကျေးဇူးများ | ရောဂါ Fighting
next ကိုပုဒ်မ သစ်သီးများအဘို့အကြီးမြတ်ဆုံးသိကောင်းစရာများနှင့် Tricks | အစွမ်းထက်ကျန်းမာဘဝ